Libya: Madaxa dowladda ay taageerto QM oo is casilaya - Somali
Play video Qaraxa laga dareemay daafaha caalamka oo dhan from BBCQaraxa laga dareemay daafaha caalamka oo dhan
Play video Qaraxa laga dareemay daafaha caalamka oo dhan from BBC
Mareykanka: Duufaanta Sally oo boqollaal kun oo qof dhigtay koronto la`aan
Uganda: Toddobo ka tirsan dadkii xabsiga ka baxsaday oo la soo xiray
Puntland oo ka digtay roobab ku soo wajahan deegaannadeeda
Xafiisyada ismaamullada Kenya oo albaabbada loo laabayo
UNICEF oo ugu baaqday Nigeria dib u eegista xukunka wiil yar oo diinta Islaamka wax ka sheegay
Posted at 11:32 17 Sebtembar 202011:32 17 Sebtembar 2020
Maxkamadaha Islaamiga ah ee Kano waxay leeyihiin booliis u gaar ahImage caption: Maxkamadaha Islaamiga ah ee Kano waxay leeyihiin booliis u gaar ah
Hay`adda UNICEF ayaa ugu baaqday dowladda Nigeria inay dib u eegto go`aanka maxkamad Islaami ah ay toban sano oo xabsi ah ugu xukuntay wiil 13 jir ah oo lagu eedeeyay inuu aflagaaddeeyay diinta Islaamka.
Hay`adda ayaa sheegtay in xukunkaasi uu ka soo horjeedo qaanuunka xuquuqda carruurta ee ay Nigeria saxiixday.
Wiilkan 13 jirka ah ayaa horraantii bishii hore la xukumay. Waxaa lagu eedeeyay inuu wax ka sheegay Ilaahay xilli ay doodayeen saaxiibkiis iyagoo ku suganaa gobolka waqooyiga dalkaas ku yaalla ee Kano. Waxaa la sheegay inuu xukunkaasi racfaan ka qaadanayo.
UNICEF ayaa ka dooneysa maamulka gobolka iyo dowladda federaalka inay dib u eegaan kiiska.
Kano wuxuu ka mid yahay labo iyo tobanka gobol ee Nigeria ee ay ku xooggan yihiin Muslimiinta, kuwaas oo lagu dhaqo shareecada Islaamka iyo sharciga kale ee dalka. Keliya Muslimiinta ayaa lagu maxkamadeeyaa kuwa Islaamiga ah. Xukunnada waxaa ka mid ah garaacid, xubnaha oo laga jaro qofka iyo xukunka dilka.
Posted at 10:55 17 Sebtembar 202010:55 17 Sebtembar 2020
Dowladaha Ismaamullada Kenya ayaa inta badan shaqaalahooda fasaxaya, iyagoo joojiyay adeegyada aan daruuriga ahayn sababo la xiriira lacag la`aan ka dhalatay muranka ka taagan qeybinta lacagta dowladda dhexe ey ugu talo gashay ismaamullada.
Golaha barasaabyada ayaa shalay ismaamullada kula taliyay in shaqaalahooda ay fasaxaan isla markaana ay joojiyaan in bukaanno la seexiyo isbitaallada.
Ilaa iyo haatan barasaabka Machakos Alfred Mutua ayaa ku amray dhammaan shaqaalaha inay galaan fasax inta lacagta laga sugayo dowladda dhexe.
Dowladda Kenya ayaan weli siin ismaamullada lacagihii loo qoondeeyay iyadpp aqalka sare uusan weli isku raacin habka loo qeybsanayo.
Dastuurka Kenya ee la hirgeliyay sanadkii 2010 ayaa lagu abuuray 47 deegaan si ay dadku ugu fududaato helitaanka adeegyada dowladda.
Posted at 9:57 17 Sebtembar 20209:57 17 Sebtembar 2020
Maxaa sabab u ah dhalinyarada Soomaalida ah ee isku dileysa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi?
Posted at 9:25 17 Sebtembar 20209:25 17 Sebtembar 2020
Afar qof oo loo soo qabtay xeradii gubatay ee Giriigga
Afar qof oo magangalyo doon ah oo u dhashay Afghanistan ayaa lagu eedeeyay inay toddobaadkii hore gubeen xerada Moria ee dalka Giriigga.
Afartaan nin, ayay haatan booliisku hayaan, waxaana la siiyay saddex maalmood oo ay ugu soo diyaar garooobaan dacwadda loo heysto.
Dhanka kale, booliiska jasiiradda Giriigga ku taalla ee Lesbos ayaa kumannaan muhaajiriin iyo qaxooti ku jiray xeradii Moria ee gubatay u rartay meel kale.
Posted at 8:42 17 Sebtembar 20208:42 17 Sebtembar 2020
Iyadoo qeyba ka mid ah gayiga Geeska Afrika ay ka curteen roobabkii dayrta, ayaa wasaaradda deegaanka iyo beeraha ee maamul gobaleedka Puntland waxa ay soo saartay digniin cusub oo ay u jeedinayso dadka deggan gobollada Bari iyo Sanaag. Gobolladaas ayey wasaaraddu sheegtay in labada todobaad ee soo socota ay ku soo fool-leeyihiin roobab xooggan. Wasaaradda ayaa waxa ay dadka ku boorisay inay taxadaraan isla markaana ay u diyaar-garoobaan khatarta ka dhalan karta roobababkaasi. Cabdicasiis Nuur Cilmi waa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo beeraha ee Puntland, digniinta ay soo saareen ayuu uga warramaya weriyaha BBC-da Mucaawiye Muxumed Buraale.
Posted at 8:14 17 Sebtembar 20208:14 17 Sebtembar 2020
Toddobo ka tirsan 219 maxaabiis oo ka baxsaday xabsiga Singila oo ku yaalla waqooyi-bari Uganda ayaa la soo qabtay.
Maxaabiista ayaa dilay askari isku dayay inuu celiyo intii aysan baxsan.
Afhayeen u hadlay xabsiga ayaa sheegay in saddex helikobtar iyo ciidamo ay u adeegsadeen soo qabashada maxaabiista. Labo ka mid ah ayaa la toogtay.
Maxaabiista ayaa loo maleynayaa inay isku dayayeen inay u baxsadaan Kenya.
Xabsiga oo ay ku jiraan in ka badan 600 oo maxaabiis, ayaa waxaa ku socota baaritaan ku saabsan sida ay u baxsadeen maxaabiista.
Ciidamada ayaa soo bandhigay sawir ku saabsan ugaarsiga ay ugu jiraan maxaabiista baxsatay:
Posted at 8:12 17 Sebtembar 20208:12 17 Sebtembar 2020
Duufaanta Sally ayaa ilaa 550,000 oo qof oo ku nool Mareykanka dhigtay koronto la`aan iyadoo roobab xooggan oo dabeylo wata ay ka da`ayaan qeybo ka mid ah dalkaas.
Duufaanta Sally oo aan hadda sidii hore u xoogganeyn ayaa saameyn ballaaran ka geysatay gobollada Florida iyo Alabama.
Hal qof ayaa ku dhintay boqollaal kalena waa laga soo badbaadiyay meelaha ay daadadku ka dhaceen.
Pensacola, oo ku taalla Florida, ayay duufaantu aad u saameysay, iyadoo dumisay qeybo ka mid ah buundo halkaasi ku taalla.
Posted at 6:29 17 Sebtembar 20206:29 17 Sebtembar 2020
Fayez al-Serraj waxaa ra`iisul wasaare loo doortay sanadkii 2015Image caption: Fayez al-Serraj waxaa ra`iisul wasaare loo doortay sanadkii 2015
Joe Biden ma wuxuu yiri "Inshaa Allah"
Waxaa baraha bulshada si weyn loo hadal hayaa erey kasoo baxay Joe Biden.
Saadaasha baaderiga iyo ololaha doorashada Mareykanka
Doorashada Mareykanka waxaa ka hartay 15 maalmood oo qura, halkan waxaa idiin kuugu soo gudbineynaa waxyaabaha haatan ka socda halkaas xilli dimuqraadiga iyo jamhuuriga uu ka dhex taagan yahay loolan doorasho.
Sababta ilaa iyo hadda loo ogaan la'yahay natiijada doorashada Mareykanka
Waxaa laga yaaba inay macquul tahay in haatan aad macluumaad ka heysato natiijada doorashada ee Mareykanka.
Mareykanka waxaa ka taagan dood xooggan oo ku saabsan qaabka loo codeynayo, iyadoo arrintaas laga gudbiyay boqollaal dacwado ah isla markaana horseeday eedeymo ku saabsan in caburin lagu hayo codbixyeyaasha doonaya in ay ka qeybgalaan doorashada madaxtinimo ee Mareykanka.
Xagey mareysaa natiijada doorashada Mareykanka?
Madaxweyne Trump iyo musharraxa sida adag loollanka u galinaya, Jose Biden ayaa aad isugu dhow xilli ay wali socoto tirinta codadka doorashada.
Wiilka ka daran aabihii Donald Trump
Waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay taageerayaashaa aabihii, kuwaasi oo intooda badan ku nool qeybi ka mid ah baadiyaha dalka.
Codbixin saadaalin ah ayaa loo sameeyay qofka ku guuleysan kara xafiiska Aqalka Cad.
Dadkii dhagaysanayay ayaa markale isa sare taagay, kuna dhawaaqay erayo ay ku dhiirogalinayaan in uu isa soo sharoxo.
Biden oo Trump ku tilmaamay madaxweynihi ugu xumaa ee abid soo mara Mareykanka
Doodda hordhaca u ah ololaha doorashada ee ay xalay yeesheen labada musharrax mararka qaar waxay isku dhaafsanayeen hadalla kulul oo aflagaaddo ay ka marneen.